तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ४ सामान्य गल्ती ! – Sandesh Press
June 28, 2021 454
काठमाडौँ । धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन रु वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
तसर्थ घरमा भएका महिला आफन्तहरुलाई हमेशा आदर गर्नुहोस्। उनीहरु रिसाएका छन् भने तत्काल मनाउने वा प्रसन्न पार्ने प्रयाश गर्नुहोस्। अक्सर पति पत्नीबीच हुने मनमुटावका कारण पनि लक्ष्मीको कृपा हुँदैन।
यदि घरमा कुनै वास्तुदोष छ भने पनि उक्त घरमा लक्ष्मीको कृपा हुँदैन। यस्तोमा वास्तुदोष भएका घरमा आएको धन पनि नासिएर वा खर्च भएर जाने हुन्छ। वास्तुशास्त्रमा घरको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भनि मार्गदर्शन गरीएको छ।
जो ब्यक्तिको कुण्डलीमा शुक्र ग्रहको स्थिति मजबूत घरमा हुन्छ उनै ब्यक्ति प्रति माता लक्ष्मीको कृपा हुने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई सुखरसमृद्धिका रुपमा मानिन्छ।
Prevहोसियार! कोरोना बिरुद्ध भन्दै नेपालमै पाइन थाल्यो नक्कली खोप, यसरी खुल्यो रहस्य
Nextजोखिम लिन पटक्कै डराउँदैनन् यी राशिका व्यक्ति, हुन्छन् बलवान र निडर
फेरी काठमाडौंका लागी उडेको बुद्ध एयरको जहाजको टायरको हावा खु’स्कियो